Neymar Junior aabihiis “Maya wiilkeygu kuma biirayo Real Madrid balse wuxuu…. – Gool FM
(Sao Paulo) 24 Feb 2019. Waxaa maalmahaan la isla dhex marayay warar sheegaya in xidigga kooxda Paris Saint-Germain ee waddanka Faransiiska iyo xulka Brazil Neymar uusan ku faraxsanayn joogitaanka Paris, isla markaana si weyn loola xiriirinayo in uu ku biiri doono kooxda Real Madrid.
Laakiin Neymar Junior aabihiis oo wareysi su’aallo badan lagu weydiiyay siiyay Barnaamij Telefishineedka Brazil ee ‘Grande Circulo’, waxa uu Aabaha Neymar oo ah wakiilkiisa uu sheegay in wiilkiisu uusan ku biiri doonin Real Madrid.
“Maya wiilkeygu kuma biiri doono Real Madrid, xagaaganna ma bixi doono oo wuxuu sii joogayaa PSG” ayuu yiri Neymar aabihiis.
Waxaa kale oo uu ka hadlay in Neymar uu Barcelona kaga soo tagay markii uu ka bixi waayay harka xidigga Barcelona ee Lionel Messi, taasoo uu doortay inuu meelo kale aado si uu xiddignimadiisa u soo shaac bixiyo ayaa waxa uu Neymar Senior yiri “Wiilkeygu Barcelona kagama soo tegin markii uu ka bixi waayay harka Messi”.
“markii uu dalab ka helay Amiir Nasser Al-Khelaifi oo doonayay in uu kooxda PSG ku soo biiriyo xiddig weyn waan ka aqbalnay” ayuu sii raaciyay Aabaha Neymar.
Neymar Junior oo ah laacibka ugu qaalisan adduunka ayaa waxaa xagaagii 2017 lacag gaareysa 200 milyan oo giniga istarliinka ah ku iibsatay PSG, waxaana uu mushaar ahaan u qaataa sanadkii 36.8 milyan oo Euro.